IVietjet iphehlelela iinqwelo moya zaseTaipei, eSingapore naseHong Kong ezisuka eDa Nang
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IVietjet iphehlelela iinqwelo moya zaseTaipei, eSingapore naseHong Kong ezisuka eDa Nang
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba ezizii-Hong Kong • iindaba • Ukukhutshwa kweendaba • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
Disemba 23, 2019
IVietjet Iqale iinkonzo ezintathu zokudibanisa iDa Nang kunye neendawo eziphambili zehlabathi - iTaipei, iSingapore neHong Kong.
Ezi ndlela zintsha kulindeleke ukuba zibonelele abakhenkethi baseVietnam nabamazwe aphesheya ngamathuba okuhamba ngokulula kungekuphela eDa Nang, isixeko esiselunxwemeni kumbindi weVietnam, kodwa nase-Indochina nakwingingqi eseMazantsi mpuma eAsia. IVietjet ngoku isebenza ngeendlela ezili-12 zamanye amazwe nezasekhaya ukuya nokubuya eDa Nang.
Imisitho yenqwelomoya yokuqala ibibanjelwe kuzo zonke iindawo apho bekukho i-Sekela Mongameli i-Vietjet u-Xuan Quang esendleleni ukwamkela abakhweli bokuqala abafika kwisikhululo senqwelomoya sase-Da Nang bevela eTaipei nase-Singapore. Kwiinqwelo-moya zokuqala, abakhweli babechulumancile kukufumana izipho ezintle kubasebenzi beenqwelomoya.
Indlela yeDa Nang-Taipei isebenza yonke imihla ukuqala nge-19 Disemba 2019 kusetyenziswa inqwelomoya entsha kunye yanamhlanje yeA320 / A321. Inqwelo moya isuka eDa Nang ngo-10: 50 kwaye ifika eTaipei ngo-14: 30. Inqwelo moya ebuyayo isuka eTaipei ngo-15: 30 kwaye imihlaba eDa Nang ngo-17: 30 (Konke ngexesha lendawo). Kwiiyure nje ezintathu, abakhweli bakulungele ukuphonononga iTaipei - esinye sezona zixeko zixakekileyo eAsia.
Indlela yeDa Nang-Singapore isebenza yonke imihla ukuqala nge-20 kaDisemba 2019 ngexesha lokubaleka elimalunga neyure ezi-2 imizuzu engama-40 ngomlenze. Inqwelo moya isuka eDa Nang ngo-12: 20 kwaye ifika eSingapore e-15: 55. Inqwelo moya ebuyayo isuka eSingapore ngo-10: 50 kwaye imihlaba eDa Nang ngo-12: 30 (Konke ngexesha lendawo). IVietjet ngoku ineendlela ezintathu ezidibanisa iVietnam neSingapore, kubandakanya iHanoi / HCMC / iDa Nang - eSingapore enobuninzi beenqwelomoya ezine ngosuku.
Indlela yeDa Nang-Hong Kong isebenza yonke imihla ukuqala nge-20 kaDisemba 2019 ngexesha lokubaleka elimalunga neyure eli-1 imizuzu engama-45 ngomlenze ngamnye. Inqwelo moya isuka eDa Nang ngo-12: 45 kwaye ifika eHong Kong ngo-15: 30. Inqwelo moya ebuyayo isuka eHong Kong ngo-17: 20 kunye namazwe eDa Nang ngo-18: 05 (Konke ngexesha lendawo). IVietjet ngoku isebenza ngeendlela ezintathu ezidibanisa iVietnam neHong Kong, kubandakanya i-HCMC / Phu Quoc / Da Nang - Hong Kong ehamba rhoqo kwiinqwelomoya ezintathu ngosuku.
IVietjet ngumdlalo otshintshayo, owenza inguquko kwishishini lokuhamba ngenqwelo moya eVietnam, enegalelo kuphuhliso lwezoqoqosho nokhenketho lwasekhaya kwiindawo zalo zenethiwekhi. Inqwelomoya yeVietjet epeyintwe ngemibala yeflegi yaseVietnam, ephethe uphawu lokhenketho kunye nokubhabha ngengoma ye-Hello Vietnam imele ngokupheleleyo imifanekiso yesizwe saseVietnam, indalo kunye nabantu kubahlobo kumazwekazi amahlanu. Oku kusika kwiindawo ezingaphezu kwamashumi asibhozo zamazwe aphesheya eMalaysia, China, India, Japan, South Korea, Thailand, Singapore nase Indonesia.
Njengenqwelo moya yabantu, iVietjet iyaqhubeka ivula iindlela ezintsha ukuzisa amathuba angaphezulu okubhabha ngamaxabiso afanelekileyo kuye wonke umntu. Ngomoya "wokhuseleko, ukonwaba, ukufikeleleka kunye nokufika ngexesha" amaxabiso asisiseko, iVietjet ngebhongo yenza amava angalibalekiyo okubhabha abakhweli kwiinqwelomoya ezintsha ezinezihlalo ezimnandi, ukhetho lwezidlo ezisithoba ezishushu ezishushu ezinikezelwa ngabasebenzi abahle nabanobuhlobo beekhabhathi kunye nabanye abaninzi Iinkonzo zale mihla ezongeziweyo kwiqonga le-e-commerce.